Tetikasa Lalàna Mahaolompirenena Iadiana Amin’ny Kolikoly Ara-politika Ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2016 5:34 GMT
Mikasa hamaha ny olana goavana momba ny kolikoly sy ny tsimatimanota ao Meksika amin'ny alalan'ny Hetsika Lalàna Sivika 3amin'ny3 ny vondrona samihafa an'ny olom-pirenena. Kendren'ny tetikasa ny hamorona lalàna novolavolain'ny fiarahamonina sivily mivantana izay manome fitaovana hanakanana sy hanasaziana ny kolikoly ataon'ny mpiasam-panjakana.
Noho izany, ireo izay nanatevin-daharana sy nanomboka nampiroborobo ny tetikasa dia niditra an-tsehatra tamin'ny fandrafetana ny hetsika Lalàna Ankapobeny momba ny Andraikitry ny Fitantanana, izay manitatra ny sehatra isan-karazany amin'ny lalàna ankehitriny miantso ny manampahefam-panjakana mba hanao fanambaram-pananana, ankoatra ny adidy hafa. Ny Hetsika Lalàna Sivika 3amin'ny3, izay antenain'ireo mpikatroka fa horesahina sy ho eken'ny Kongresy dia mametraka izao manaraka izao:
Ny andininy faha-71 ao amin'ny Lalàmpanorenana Meksikana dia manome fahafahana ho an'ny olom-pirenena mba hanolotra lalàna mivantana any amin'ny Kongresy, saingy tsy maintsy mahazo fanohanana 0,13 isan-jaton'ny lisitry ny mpifidy farafahakeliny ny tolo-dalàna. Amin'ny teny hafa, tsy maintsy tohanan'ny olona 120.000 farafahakeliny ny tolo-dalàna mahaolompirenena vao tafiditra amin'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny Kongresy.
Araka izany, ny Hetsika sivika 3of3 dia nanokan-tena hampiroborobo ny fikatrohana sy ny fandraisana anjaran'ny sivily, amin'ny fampiasana tambajotra sosialy tahaka ny Facebook, Twitter, Instagram, ary YouTube mba hanentana amin'ny hetsika, ary manasa koa ny olona handray anjara sy hizara vaovao misy ny toerana hiasan'izy ireo hanangonana sonia.
Miady amin'ny kolikoly tena avo lenta i Meksika. Araka ny fikarohana farany avy amin'ny Transparency International, izay niara-miasa tamin'ny Transparency Mexico, laharana faha-95 amin'ireo firenena 168 i Meksika eo amin'ny Tondro momba ny Kolikoly ary mitàna ny toerana farany eo amin'ireo firenena 34 mpikambana ao amin'ny Fikambanana ho an'ny Fiarahamiasa sy ny Fampandrosoana ny Toekarena.
Namintina ny toe-draharaha tahaka izao ny sampam-baovao El País:
Amin'ny ady amin'ny kolikoly izay mbola lavitra ny lalana, miatrika tantara ratsin'ny fanodikodinam-bola sy ny fangalarana loharanon-karena i Meksika ankehitriny, ary koa ny fanao hafa tsy tambo isaina amin'ny kolikoly ara-politika. Mandritra izany fotoana izany, mila lalàna faharoa hiadiana amin'ny kolikoly ho ampiharina amim-pahombiazana ny fanavaozana lalàmpanorenana natao.
#Ley3de3 [Lalàna 3amin'ny3] dia feon'ny Meksikana maro mitaky fanovana ho an'i Meksika sy manohitra ny kolikoly.